Qorshe wax looga badalayo heshiiskii 17 -kii September oo socda | KEYDMEDIA ONLINE
Qorshe wax looga badalayo heshiiskii 17 -kii September oo socda
Qaar kamida madaxda ka qeyb galeysa shirka wadatashiga qaran ee ka furmay magaalada Muqdisho ayaa qorsheynaya in ay wax ka badalaan heshiiskii 17 -kii September.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxda ka qeyb galaysa shirka maanta ka furmay Teendhada xerada ciidamada Afisiyooni ayaa laga soo xigtay in qaar kamida mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada ay u ololeenayaan in wax kabaddal lagu sameeyo heshiiskii 17 -kii September.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa soo jeediyay in heshiiska 17 -kii September wax laga baddalo, caqabadda kaliya ee uu u arko Guudlaawe in ay khuseyso waa in la ansixiyo qodob kamida heshiiskaasi oo dhigayay in laba goobood lagu qabto doorashada kuraasta xildhibaanada dowlad goboleedyada.
Guudlaawe sidii loo doortay 11/11/2020 marna ma booqan magaalada Baladweyne, iyadoo dadka reer Hiiraan ay kasoo horjeedaan nidaamka wax qeybsiga ee lagu saleeyay Hirshabeelle ayey iska diideen inuu booqdo Guudlaawe magaalada Baladweyne.
Culeyskaasi dartii ayuu guudlaawe gadaal uga riixayaa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo taa oo noqoneysa caasimadda maamulkaasi ee Jowhar.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isna kamida dadka qaba aragtidaas, waxaana sabab u ah culeyska isna ka haysta ciidamda dowladda federaalka ee la geeyay gobolka Gedo. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa isna doonayo inuu maamulo doorashada kuraasta Gobolka Gedo.
Haddii qodobkan uu dhaqan galo waxaa meesha ka baxaya damacii madaxweyne Farmaajo ee ahaa inuu soo xusho 16 kursi oo taal gobolka Gedo, sidoo kale waxaa u sahlanaan doonta madaxweynaha Hirshabeelle inuu isagu soo xusho xildhibaanada labada Aqal, mar haddii laga soo wareejiyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuraastii taallay.